गोसाइकुण्ड जाने भूत – Pramb's Weblog
जुलाई 25, 2009 by PRAMB
गोसाइकुण्ड जाने भूत
तस्वीर सबै रियालिटि बाइटस् ब्लगबाट साभार
आजकाल दिन यतिकै वित्दै छ । विना कामको । जाँच सकेपछि यो गर्छु त्यो गर्छु र् याकमा कहिले देखि थन्किएका किताब पढ्छु मन लागेको ठाउँ घुम्न जान्छु । तर खै त यतिका दिन बितिसक्यो मैले योजना अनुरुप काम गरेको । यो विदाले त मलाई झन् पिरोल्दै छ किनकी म त दिनभर अल्छी हुँदै छु । टिभी हेर्छु हेर्दा हेर्दै निदाउँछु । दिनभरमा पचास पटक किचन जान्छु खान्छु मोटाउँछु ।
तीस पेजको लेख्नुपर्ने प्रोजेक्ट कहाँ गयो छनलाई त दिमाग मै छ । तर गरेको छैन । छोएको सम्म पनि छैन । आफैँलाई दिक्दारी चलेर आउँछ मैले के ताइँ न तुँइको विषय छानेछु । अब अरु गर्न पनि त के सक्छु र यसैलाई सुरु गर्न पाए हुन्थ्यो त्यो साईत खै कहिले आउँछ । यो सम्झेर आफैँ देखि दिक्क लाग्छ । मानिसले कति तिर के मात्रै गर्दैनन् म सँग त फुस्रदै फुस्रद हुँदा पनि केही गर्दिन । छि म त । बेसोमति निर्लज्ज । साथी रु ले मजाकमै दिएको कुनै बेलाको उपनाम जस्तै ।
स्वर्गाको टुक्रा सायद यस्तै दृश्यलाई भनिन्छ
खासमा समस्या आफैँमा हो । कतै जाने हुटहुटि चलेपछि नगए सम्म म यस्तै । कहिले सम्म चल्ला यस्तो एकलकाटे जिद्दि बानीले । ुसधै यस्तो बानीले चल्दैन तु कसैकसैको सदाबहार डाइलग । साँचो पनि हो ।
अहिले मलाई गोसाइकुण्ड जाने गज्जबको भूत चडेको छ । हेरुँ जाने कुरा कतिको मिल्छ । गोसाइकुण्डका तस्बिर दिनमा कम्तीमा आधा घण्टा हेरेर आफैँमा उखरमाउलो हुन्छ । संसार साच्चै विचित्रको छ । जो की यति सुन्दर ठाउँ बनेका छन् । कुण्ड यति निश्चल र काचन छ की माथिका आकाशै छाँयामा मात्र किन र साच्चै त्यही पानी माथि तैरिए जस्तो । सायद आकाशको निश्चलता र पानीको काचन वर्णन यही दृश्यलाई मात्रै प्रयोग गर्नु वजस्वी हुन्छ । सार्थक हुन्छ ।
यस्ता हिमाल हेर्ने अबसर कसरी छोड्नु ?
धेरै मान्छे भन्छन् एक्लै नजानु नि गोसाइकुण्ड । बाटो ठिक छैन । अब के गरुँ त कोही साथी नपाएपछि म पाए कोही साथी सँग जाउँला नपाए एक्लै पनि जाउँला । घरमा भन्दै हुनुहुन्छ बाटाभरी मान्छे हुन्छन् एक्लै गए पनि केही नहोला ।
त्यसैले लाग्छ यो पटक त साईत जुरेको होला नी मलाई जान । त्यहाँ जान पाए के मात्रै हुँदैन थियो होला । ती तस्बिर आफैँले खिच्न पाउँदा झ्न मलाई कति ठुलो आत्मसन्तुष्टि होला । सोच्दै मन भरिएर आउँछ । म पक्का जान्छु हो यो पटक त गोसाइकुण्ड । अब मात्रै मलाई अठार गतेको पर्खाइ छ । निश्चित त पुरा छैन के पक्का भन्नु । गइन भने फेरी उही निराश भएर यही ब्लगमा त पोखुँला आफ्ना निराशा ।
← दृष्टिविहीनको ‘भिजन टुर’
मित्रता दिवस, सुन्दरीजलको उकालो र ती दिनहरु… →
Asadoctor, Devkota seemed to know exactly when his time was up, and asked to be put sedatives two days ago. He di… twitter.com/i/web/status/1… 58 minutes ago